Santa Maria del Naranco | ခရီးသွားသတင်း
အကယ်၍ သင်သည်အနုပညာနှင့်ဗိသုကာဆိုင်ရာလက်ရာများကိုနှစ်သက်လျှင်၊ ကျွန်းဆွယ်ရှိရောမခေတ်မတိုင်မီကသင်ကြားဖူးသည်။ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက် Oviedo မြို့မှာဒီလမ်းကြောင်းကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အမြောက်အများကိုတွေ့ရပါတယ် Santa María del Naranco ၏ဘုရားကျောင်း။ ဤဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည် Oviedo တွင်ထူးချွန်သောခရီးသွား of ည့်သည်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံကြီးကိုတည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာနှစ် ဦး စလုံးကြောင်းပြောရပါမည် San Miguel de Lillo အဖြစ် Santa María del Naranco နှင့် Santa Cristina de Lena တို့သည်အလယ်ခေတ်ဥရောပကိုကိုယ်စားပြုပြီးထိုအချိန်ကာလ၏အရေးအကြီးဆုံးအဆောက်အအုံများဖြစ်သည်။ ဒီနေ့စန်တာမာရီယာဒီနာရာကိုကို Ramiro I. နန်းစံကာလအတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။
1 Santa María del Naranco ၏သမိုင်း
2 အဆောက်အ ဦး
3 Santa María del Naranco ၏အလှဆင်
4 Santa María del Naranco ၏အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်
Santa María del Naranco ၏သမိုင်း
Santa María del Naranco သည် San Miguel de Lillo ရှိသည့်နန်းတော်အဆောက်အအုံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှဤနေရာသည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသော်လည်း၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသော်လည်းတော်ဝင်စာသင်ခန်း၊ နန်းတော်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသည် Aula Regia San Miguel အချို့အစိတ်အပိုင်းများပြိုကျသောအခါအခြေအနေပြောင်းသွား, ဒါကြောင့်ယနေ့ Santa María del Naranco ၎င်းကို Pre-Romanesque ဘုရားကျောင်းဟုလူသိများသည်.
ရှုပ်ထွေးသောအဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးကို Ramiro I. နန်းစံရှစ်နှစ်အတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထိုဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည် Gothic နှင့် Baroque ကာလအတွင်းအမျိုးမျိုးသောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ် 1885 အမျိုးသားမော်ကွန်းတိုင်ကြေညာခဲ့သည် နှင့် 1929 ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၅ တွင် Asturias ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများအပိုင်းတွင်ယူနက်စကိုမှကမ္ဘာ့အမွေခံနေရာအဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။
အပန်းဖြေရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဤနန်းတော်အနည်းငယ်ရှိပါတယ် နှစ်ဆယ်မီတာအရှည်နှင့်ခြောက်လအကျယ်။ အပြင်ဘက်မှလှေကားများပါ ၀ င်သောရှင်းလင်းသောကွဲပြားသောကြမ်းပြင်နှစ်ခုရှိသည်။ အပြင်ဘက်မှကြမ်းပြင်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိသောအဆောက်အအုံကိုတွေ့နိုင်သည်။ ကြမ်းပြင်နှစ်ခုနှင့် gabled ခေါင်မိုးနှင့်အတူ။ ရှည်လျားသောနှစ်ဖက်စလုံးတွင်အဆောက်အ ဦး ၏ဝင်ပေါက်ကိုကမ်းလှမ်းသောပတ် ၀ န်းကျင်မုတ်များဖြင့်တံခါးများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ မြောက်ပိုင်းရိယာတွင်အပေါ်ထပ်accessရိယာကို ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်လှေကားထစ်များရှိသည်။
အ စွန်းတိုင်အောင်မျက်နှာစာသူတို့ရဲ့အလှအပများအတွက်သပိတ်မှောက်နေကြသည်, အချိုးအစား၏ကြီးမြတ်အရေးပါမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ။ မျက်နှာကျက်တွင်ရှိသော bank semicircular arches သုံးခုပါရှိသောလသာဆောင်များသည်ယင်း၏အထင်ရှားဆုံးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗဟိုမဟာအခြားနှစ်ခုထက်ပိုကြီးသည်။ ဤမုတ်များသည်ချာ့ချ်အထက်ပိုင်းသို့အလင်းများစွာယူဆောင်လာသည်။ အပေါ်ပိုင်းarရိယာတွင်မကိန်းသုံးခုပါ ၀ င်သောပြတင်းပေါက်တစ်ခုကိုလည်းမြင်နိုင်သည်။
အတွင်းပိုင်းကနေလုပ်နိုင်တယ် အောက်ပိုင်းသို့လှေကားထစ်ဖြင့်အထက်သို့တက်ပါ။ အပေါ်ထပ်သည်မင်းသားများနေထိုင်ရာနေရာဖြစ်ပြီး corbels မှပံ့ပိုးထားသောမုတ်ခြောက်ချောင်းပါရှိသည်။ အထက်ဖော်ပြပါလသာဆောင်များဆီသို့areaရိယာအပြင်ဘက်သို့ဖွင့်လှစ်ပေးသည်။ အခြားစက်ရုံသည်အလားတူဖြန့်ဖြူးမှုရှိသော်လည်းသေးငယ်သောပမာဏရှိသည်။
ဒါဟာတစ်ခုလုံးကိုအလုပ် ashlar, Asturian အနုပညာအတွက်ဘုံပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ အစုကိုလည်းအခြား အသေးစားဝန်ဆောင်မှုအဆောက်အ ဦး များအများစုမှာပျောက်ကွယ်သွားပေမယ့်။ ထို့ကြောင့် San Miguel de Lillo နှင့် Santa María del Naranco တို့သည်အုပ်စုတစ်ခုတည်းတွင်ပါ ၀ င်နေခြင်းကိုတန်ဖိုးမထားတော့ပါ။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအခြေအနေကောင်းတွင်ရှိသည်။
Santa María del Naranco ၏အလှဆင်
ဤသည်အဆောက်အ ဦး သည်ပထမတစ်ချက်တွင်အလွန်ကြမ်းတမ်းသောပုံရှိသော်လည်း Romanesque နှင့် Pre-Romanesque တို့ကဲ့သို့ပင်အမှန်တရားတွင်၎င်းတွင်အလှဆင်ထားသောဒြပ်စင်အချို့ရှိသည်။ ဒါဟာကြိုးနှင့်အတူအလှဆင်ကြည့်ဖို့အလွန်ဘုံဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုသည်မှာအချို့သောcapရိယာများကဲ့သို့သောနေရာများကိုအလှဆင်ထားသောကြိုးများကိုတုပခြင်းဖြစ်သည်။ ကော်လံ၏စာလုံးကြီးများတွင်အပင်များနှင့်သတ္တဝါများနှင့်အတူသဘာဝ motif များကိုအမြဲတွေ့မြင်နိုင်သည်။
Santa María del Naranco ၏အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်
ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသောအလယ်ခေတ်နှင့်ရောမခေတ်မတိုင်မီက Asturias ၏အရေးအပါဆုံးအလုပ်တစ်ခုကိုရင်ဆိုင်နေရသည်။ အနုပညာအလုပ်အကိုင်များအတွက်လေ့လာထားပြီးကြောင်းတစ် ဦး ကအလုပ်။ ဒီနေရာကိုသွားရောက်လည်ပတ်ဖို့လွယ်ကူသည် ၎င်းသည် Naranco တောင်ရှိ Oviedo အနီးတွင်တည်ရှိသည်။ သမိုင်း ၀ င်စင်တာနှင့် ၄ ကီလိုမီတာအကွာတွင်ဤအရေးကြီးသောအလုပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အဲဒီမှာဝင်ခွင့်အတွက်ပေးဆောင်ဖို့စျေးနှုန်းသေးငယ်တဲ့စျေးနှုန်းသည်ပေမယ့်ကျိန်းသေကျိုးနပ်သည်။ ငါတို့ကမြို့လယ်ခေါင်မှာရှိတယ်ဆိုရင်ကျော်ကြားတဲ့ဥရိယာလမ်းကနေဘတ်စကားမှတ်တိုင်ကိုသွားနိုင်တယ်။ ဒီမှစ။ Santa María del Naranco သို့ကျွန်ုပ်တို့သွားနိုင်သောဤတောင်ပေါ်သို့ပို့ဆောင်သောလိုင်း A တွင်ဘတ်စ်ကားစီး။ သွားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လမ်းလျှောက်လိုပါကတောင်တက်ခြင်းတစ်စုံတစ်ရာရှိကြောင်းသတိရသင့်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့တောင်တက်ရန်အဆင်သင့်ရှိပါကမြို့၏လှပသောရှုခင်းများကိုမြင်နိုင်သောလှပသောဤအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံသို့သွားရောက်လည်ပတ်ရန်အစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ယေဘုယျ » Santa Maria del Naranco